Warranty Policy _ New Design - iSure Myanmar
Enjoy Your New Product with Peace of Mind
User Fault ပဲ ဖြစ်စေ Factory Fault ပဲဖြစ်စေ Customer ရဲ့လိုအပ်ချက် ၊ တောင်းဆိုမှု့များကို သေချာစွာ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတဲ့အပြင် ဖြစ်တဲ့ Error အလိုက်အကောင်းဆုံး ၊ စိတ်တိုင်းအကျဆုံး ဖြစ်‌အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အသင့်ရှိနေတဲ့ After Sales Service
Apple မှ တွေ့ရှိသော စစ်ဆေးချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ပေးမှု့များကို တိကျစွာဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက် အလက်များ နှင့်အတူ သေချာစွာရှင်းပြပေးပြီး Customer ထံသို့ပြန်လည်အပ်နှံပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှု
Warranty ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့ Device အား လူ ကိုယ်တိုင်လာယူရန် အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင် အိမ်အထိ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည့်အပြင် Apple မှ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖုန်းဆက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု
Apple ရဲ့ Warranty Service လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် iSure မှ ဝယ်ယူထားသော Device ဖြစ်စရာမလိုပဲ အခြားမည်သည့် Region ကဝယ်ယူထားသော Device ဖြစ်စေ သင့်တင့်သော ဝန်ဆောင်မှု့ Charges ဖြင့် ပြည့်ဝတဲ့ Apple Warranty Service ရရှိနိုင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှု
Apple သို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးနေစဥ်အချိန်ကာလအတွင်း Customer ရဲ့လိုအပ်ချက်အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး ခေတ္တ အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်မယ့် Device အစားထိုးစီစဥ်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု့ (subject on advance)
Warranty နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု့အပြည့်အဝရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့်
iSure ရဲ့ Warranty Policy
iSure မှ လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာ After Sales ဝန်ဆောင်မှု့အနေဖြင့် Warranty နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု့အပြည့်အဝရရှိအောင်အစဥ်တစိုက်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ Page လေးမှာတိကျသေချာသော သတ်မှတ်ချက်များ နဲ့အတူ Warranty နှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့သော ဝန်ဆောင်မှု့တွေ ကို Product အလိုက်မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ် ဆိုတာကို မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Limited & Extended Warranty
iPhone/iPad/Apple Watch & Airpods
1 to 1 Exchange Services
(1) Year Limited Warranty + (1) Year Extended Warranty
iSure မှဝယ်ယူထားသော Apple Device များတွက် Apple Official Warranty ကာလအတွင်း Factory Fault များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက Apple Official (1) Year Warranty အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁)ပါတ်အတွင်း Factory Error ဖြစ်ပါက iSure မှ (၂၄)နာရီအတွင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံးနှင့် လဲလှယ်ပေးပါမည်iSure သည် Customer များနစ်နာမှုမရှိရလေအောင် iSure မှဝယ်ယူသော iPhone, iPad, Apple Watch နှင့် AirPod များအပေါ် အောက်ပါအာမခံချက် များအတိုင်း ရောင်းချပေးပါသည်။။
Packing ဖွင့်ပြီးခါစ factory Error ရှိပါကချက်ခြင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးတူ နောက်တစ်လုံး လဲပေးမည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁)ပတ်အတွင်း Factory Error ဖြစ်ပါက (၂၄)နာရီအတွင်း Warranty အပြည့် ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံးလဲပေးမည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁)လအတွင်း Error ဖြစ်ပါက Apple ထံပို့၍စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး Error တွေ့ပါက (၁)ပါတ်အတွင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံးလဲပေးမည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁) လကျော်ပါက Apple ထံပို့၍စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ (၃) ပါတ်မှ (၅)ပါတ် ကြာမြင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Factory Error မှန်ကန်ပါက Apple မှပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်လဲပေးခြင်းကို customer မှလက်ခံပေးရမည်။ အကယ်၍ Factory Error မဟုတ်ပါက မည်သည့်ပြုပြင်မှုမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပဲ Apple မှဒဏ်ရိုက်ခဲ့လျှင် ဒါဏ်ကြေးငွေ USD 130 နှင့် iSure Service Fees တို့ကို Customer ဘက်မှပေးဆောင်ရပါမည်။
Warranty ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် Customer ဘက်မှလည်း အောက်ပါအချက်များကို မဖြစ်မနေပေးရပါမည်။
iCloud, Find My iPhone, Passcode, SIM Lock တို့ကိုဖြုတ်ထားရပါမည်။ Customer ဘက်မှ အဆိုပါကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိပါက Apple ဘက်မှလည်း Warranty ကိစ္စ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်သလို iSure Service Fees ကိုလည်း ပေးဆောင်ရပါမည်။
Device အတွင်းရှိ မိမိ Data များကို Backup လုပ်ထားပေးပါ။ ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက iSure မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
Apple ထံသို့ပို့ဆောင်၍ Error စစ်ဆေးရာတွင် 1Year Official Warranty ကာလအတွင်း Apple ၏စစ်ဆေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ကြောင်း Customer အနေဖြင့် လက်ခံပေးရမည်။
Device အတွင်းရှိ မိမိ Data များကို Backup လုပ်ထားပေးပါ။ ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက iSure မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ဝယ်ယူပြီး (၁)ပါတ်အတွင်း Factory Error ဖြစ်ပါက iSure မှ (၂၄)နာရီအတွင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံးနှင့် လဲလှယ်ပေးပါမည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁)လအတွင်း Error ဖြစ်ပါက Apple ထံ ပေးပို့၍ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး Error တွေ့ရှိပါက iSure မှ (၁)ပါတ်အတွင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံး လဲလှယ်ပေးပါမည်။
ဝယ်ယူပြီး (၁)လအထက် ကျော်လွန်သွားပါက Apple ထံပို့၍ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ Apple ၏ Warranty Processing Time အရ (၃)ပါတ်မှ (၅)ပါတ် ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Factory Error မှန်ကန်ပါက Apple မှပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်လဲပေးခြင်းကို Customer မှ လက်ခံပေးရပါမည်။
Apple မှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြုပြင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့် Error မှာလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပါက iSure Warranty Care Service အရ Customer အတွက် နစ်နာမှုမရှိစေရန် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
For the devices that have been affected by factory error after unpacking, iSure will replace the exact model with full warranty coverage.
For the devices that have been affected by factory error withinaweek after purchase, iSure will replace the exact model with full warranty coverage within 24 hours.
For defective devices withinamonth after purchase, iSure will send the device for inspection to Apple. If the defect is found, iSure will replace the exact model with full warranty coverage withinaweek.
If users found defects afteramonth of usage, iSure will send back the device to Apple. This process could take between3weeks to5weeks due to Apple warranty processing time. If the defective issue is factory fault, customers have to accept the repair or the replacement services provided by Apple.
If the defects are not covered by Apple limited warranty coverage and failed to be repaired by Apple, iSure will handle the best for customers according to our own warranty care service.
Packing ဖွင့်ပြီးခါစ Factory Error တွေ့ရှိပါက iSure မှ ချက်ခြင်း Warranty အပြည့်ပါသည့် အမျိုးအစားတူ နောက်တစ်လုံးနှင့် လဲလှယ်ပေးပါမည်။
ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့မှစ၍ Error တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟုယူဆရပါက Apple ထံသို့ပို့၍ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ထိုစစ်ဆေးမှု့သည် အချိန်အားဖြင့် (၅) ရက်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါမည်။ ထိုစစ်ဆေးမှု့ Result သည် Apple ၏စစ်ဆေးချက် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ကြောင်း Customer မှ လက်ခံပေးရပါမည်။
ထိုစစ်ဆေးမှု့သည် Factory Error မှန်ကန်ပါက Apple မှ Error ဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုသာ ပြုပြင်လဲလှယ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ရန်အတွက် အချိန်ကာလ အားဖြင့် (၃)ပတ် မှ (၅)ပတ်ခန့်အထိ ထပ်မံကြာမြင့် နိုင်ပါသည်။ (အလုံးအသစ် လဲလှယ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။)
အကယ်၍ Apple မှ ထိုစစ်ဆေးမှု့သည် Factory Error မဟုတ်ခဲ့ပါက ဖြစ်သည့် Error ပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ်အား iSure မှ Customer ထံသို့ အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊ iSure မှ ပြုပြင်ရန် အတွက် Customer သဘောတူညီမှု့ရရှိမှသာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ အကယ်၍ Customer မှ ပြုပြင်ရန်အတွက် သဘော မတူညီပါကလည်း iSure မှ မည်သည့် အခကြေးငွေ မှ မယူပဲ ပြန်လည်အပ်နှံပေးပါမည်။
Warranty ရှိသော Device များတွင် User Fault ဖြစ်ပေါ်သည့်အတွက် အခကြေးငွေ ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် လက်ရှိ Device တွင်ကျန်ရှိသော Warranty ကာလ အလိုက်ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိပါမည်။
iSure မှ ဝယ်ယူသော Apple Accessories များအား Apple မှ အာမခံအနေဖြင့် တစ်နှစ်ခံစားခွင့် ပေးထား ပါသည်။ Apple Device အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ Warranty သတ်မှတ်ချက်များ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှု့ရှိပါသည်။
Cable (iPhone/iPad), Adapter (iPhone/iPad) , Lightning Earpods , Pencil နှင့် Air Tag များအတွက် Warranty သတ်မှတ်ချက်
Apple Original Accessories များ အားဝယ်ယူပြီး Packing ဖွင့်သည့်အချိန်တွင် Error တွေ့ရှိပါက ချက်ချင်းအသစ်လဲလှယ်ပေးပါမည် ၊ ဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း Error တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပါက Apple သို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တပတ်အားဖြင့် (၃) ပတ်မှ (၅) ပတ်ခန့်အထိ ကြာမြင့်ပါမည်။
အထက်ပါ Accessories များမှ Device ဝယ်ယူသည့်အခါတပါတည်းပူးတွဲပါရှိသော Accessories များ Error ဖြစ်ခဲ့ပါက Apple သို့သာပို့ဆောင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး (၃) ပတ်မှ (၅) ပတ်ခန့် ကြာမြင့်ပါမည်။
Apple မှ စစ်ဆေးသည့်အခါ Factory Error မဟုတ်ခဲ့ပါက Apple မှ ကောက်ခံသော Service Fees နှင့် အတူ iSure Service Fees တို့ကို Customer မှ ကျသင့်ပေးရပါမည်။
MacBook နှင် ဆက်စပ်သုံးစွဲရသော Accessories များ Error ဖြစ်ပေါ်ပါက Apple Authorized Service Provider ထံသို့ Device နှင့်တကွ စစ်‌ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အတွက် Device ပါအတူတကွ အပ်နှံပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Error စစ်ဆေးရန် အနည်းဆုံး (၃) ရက်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ Device အား Customer ထံ ပြန်လည်အပ်နှံပေးမည်ဖြစ်ပြီး Accessories သည် Factory Error မှန်ကန်ပါက Warranty အားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် (၃) ပတ် မှ (၅) ပတ်အထိ ထပ်မံကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
Factory Error အကျုံးမဝင်ပါက iSure မှ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု့ အခကြေး‌ငွေမှ မယူပဲ Customer ထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပေးပါမည်။ ( MacBook နှင့် ဆက်စပ်သော Accessories များအတွက်သာ)
iMac ဖြင့် ဆက်စပ်သုံးစွဲရသော Accessories များ အနေဖြင့် Error ဖြစ်ပေါ်ပါက Apple Authorized Service Provider ထံသို့ပို့၍ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကာ အနည်းဆုံး (၃) ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး Factory Error မှန်ကန်ပါက (၃) ပတ်မှ (၅) ပတ်ခန့် ထပ်မံကြာမြင့်ပါမည်။ Error ဖြစ်ပေါ်သည့် Accessories အမျိုးအစား ပေါ်မူတည်၍ Device အားပူးတွဲစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Factory Error အကျုံးမဝင်ပါက iSure မှ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု့ အခကြေး‌ငွေမှ မယူပဲ Customer ထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပေးပါမည်။ ( iMac နှင့် ဆက်စပ်သော Accessories များအတွက်သာ)
Customer မှ သတိပြုစေရန်အချက်များ
အထက်ပါ Warranty Service လာရောက်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ iSure မှ ဝယ်ယူထားသော Invoice အား ယူဆောင်လာပေးရပါမည်။
Warranty ၏ သက်တမ်းမှာ Invoice တွင် ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ တစ်နှစ်တိတိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
Apple သို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးရာတွင် Apple ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင်အတည်ဖြစ်ကြောင်းကို လက်ခံပေးရပါမည်။
Third Party Accessories များတွင် သက်ဆိုင်ရာ Company မှပေးထားသော Warranty အားရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Warranty Policy မှာမူ သက်ဆိုင်ရာ Company မှသက်မှတ်ချက်များအတိုင်းခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Every third party accessories warranty will be covered according to the manufacturer. For more details on warranty policy, please check the respective manufacturer company.
1 To 1 Exchange Service Terms & Conditions
iSure တွင် 1 To 1 Exchange Service လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင်အောက်ပါအချက်များအား သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။
Find My Phone ပိတ်ပေးထားရမည်။
Data Back up ယူထားရမည်။
စက်ကိုဖွင့်စစ်ထားဖူးခြင်း ၊ ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိရပါ။ အကယ်၍ Apple မှ စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက Service လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ပြယ်နိုင်မည့်အပြင် Apple မှ ကောက်ခံသော ဒဏ်ကြေးငွေ နှင့်အတူ iSure သို့ service charges ပေးသွင်းရပါမည်။
Device မှာ အတွင်းစက်သား သိသာထင်ရှားစွာပါ်နေသည်မှလွဲ၍ မည်သို့သော Accidental Damage များ ဖြစ်ပေါ်နေပါစေ Service အားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းလုပ်ဆောင်မည့် Device ၏ ကျသင့်ငွေအား iSure ၏ Page messenger မှသော်လည်းကောင်း ၊ Hot Line Phone Number မှ သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျသင့်ငွေအား Device စတင်အပ်နှံလုပ်ဆောင်သည်နှင့် အပြည့်အဝပေးသွင်းရပါမည်။
Waiting Times အနေဖြင့် (၁) လ မှ (၂) လ ခန့်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစားတူ Device Only သာပြန်လည်ရရှိပါမည်။
မူလ Device ၏ Warranty လက်ကျန်ကာလအတိုင်းဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိပါမည်။
Apple မှ လုပ်ဆောင်ပေးသော Device/Model အမျိုးအစားကိုသာ Service လုပ်ဆောင် ပေးပါမည်။
iSure မှ ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ ၊ ပြင်ပမှဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ 1 To 1 Exchange Service အား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1 Year Official Warranty + 1 Year Extended Warranty
ဝယ်ယူပြီး (၁) လကျော်ပါက Apple ထံပို့၍စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။
(၃) ပါတ်မှ (၅)ပါတ် ကြာမြင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Factory Error မှန်ကန်ပါက Apple မှပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်လဲပေးခြင်းကို customer မှလက်ခံပေးရမည်။ အကယ်၍ Factory Error မဟုတ်ပါက မည်သည့်ပြုပြင်မှုမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပဲ Apple မှဒဏ်ရိုက်ခဲ့လျှင် ဒါဏ်ကြေးငွေ USD 130 နှင့် iSure Service Fees တို့ကို Customer ဘက်မှပေးဆောင်ရပါမည်။
Factory Error ဖြစ်လို့ Apple မှ Device အသစ်လဲပေးလိုက်ပါတယ်၊ Warranty လက်ကျန်ကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ?
မူလ Device ၏ လက်ကျန်လအတိုင်းဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
(3) ပတ်မှ (5) ပတ်အနည်းဆုံးကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
Apple က Device ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲ, အသစ်ပြန်လဲပေးတာလား?
Apple က Device ကို စစ်ဆေးပြီး ၊ ဖြစ်သော Error အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး New Device သော် လည်းကောင်း ၊ ဖြစ်သော Parts ကိုသော်လည်းကောင်း လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Oversea က ဝယ်လာတာမို့ Warranty လုပ်ဆောင်လို့ရပါသလား?
မည်သည့် Region မဆို ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။